Iscasilaadda tababarihi xulka England Fabio Capello oo si weyn loo hadal hayo iyo saameyn laga cabsi qabo. - iftineducation.com
tababarihi xulka England Fabio Capello
iftineducation.com – Wergeysyada kasoo baxa dalka Engaland ayaa siyaabo kale duwan uga hadlay iscasilaadii tababarihi xulka England Fabio Capello,waxaana ay sheegeen in iscasilaadda Capello laga yaabo in ay saameyn ku yeelato xulka Three Lion-ka.
Wargeyska The Sun iyo Daily Sun waxa ay sheegeen in iscasilaadi tababaraha England ay ka danbeysay kadib marki Fabio Capello uu ku adkeystay inuusan raali gelin ka bixineynin go’aankiisii uu kaga soo horjeeday go’aanka ay xiriirka FA-da xilka kabtanimo uga qaadeen John Terry.
Fabio Capello ayaa kulan uu shalay la qaatay madaxda sare ee FA-da,waxa ay uga hadleen sababta macalin Capello ku kaliftay inuu si cad uga soo horjeesto go’aanka ay FA-da kabtanimada kaga xayuubiyeen Terry,waxaana madaxa xiriirka FA-da uu u soo jeediyey Fabio Capello inuu raali gelin ka bixiyo wareysigii uu ku cambaareeynayey go’aanka FA-da.
Laakin Fabio Capello ayaa iska diiday taa waxaana uu kulanka kadib ku dhawaaqay iscasilaadda,isagoona faarujiyey leylinta xulka England.
Wargeyska Daily Sun ayaa sheegay in laga yaabo in ciyaar yahan John Terry uu ka fiirsto ciyaaraha xulka Engaland,maadaama laga doonayey inuu muujiyo taageeraddi uu u Capello u muujiyey islamarkaana shaqada uga tegay.
Booska uu faarujiyey macalinkii hore ee England Fabio Capello ayaa la sheegay inuu ugu cad cadyahay in loo magacaabo tababaraha kooxda Tottenham, Harry Redknapp.
Rio Ferdinand iyo Rooney ayaa qaba fikirka ah in tababaraha xulka England in loo magacaabo macalin Harry endknapp.